Filaza tsotra (fitsipiteny) - Wikipedia
Ny filaza tsotra dia endriky ny teny atao vara na entimilaza (ny matoanteny amin'ny fiteny maro) izay entin'ny mpiteny na ny mpanoratra hanehoany fa mifanentana amin'ny zava-misy marina ny votoantin' ny zavatra lazainy. Toetra ara-keviteny ankapobeny ihany anefa izany satria raha tsy manana filaza maro ilay fiteny dia tsy maintsy hampiasa ny filaza tsotra ny mpiteny na ny mpanoratra mba hanehoany ny votoatin'izay lazainy izay fantatra fa tsy araka ny zava-misy.
Ao amin'ny fiteny maro tsy manana filaza manokana hanambaràna ny fomba sasany iheverana ny zavatra lazaina dia afaka misolo ireo filaza tsy ananana ireo ny filaza tsotra. Na ireo fiteny manana ireo filaza manokana ireo aza dia mampifandimby ny filaza tsotra amin'ireo filaza ireo raha izany no takin'ny fitsipiteny ka amin'ny alalan'ny fampiasana rafitra manokan'ny fehezanteny na fampiasana teny natokana hanambaràna ny hevitr'ilay filaza tsy ananana no anatanterahana izany. Noho izany dia afaka manana hevitra maro ny filaza tsotra ankoantry ny hevitra andrasana indrindra.
Toy izany no miseho eo amin'ny fiteny malagasy, izay tsy manana filaza hafa ankoatry ny filaza mandidy. Na ny fiteny frantsay izay azo lazaina fa manana filaza maro aza dia mampiasa ny filaza tsotra hanambaràna ny zavatra mampisalasala (jereo ohatra ny fampiasana ny filazam-potoana lasa mivelatra (frantsay: imparfait) na ny lasan'ny lasa (frantsay: plus-que-parfait) hanambaràny ny zavatra nofinofy ao amin'ny fehezankevitra misy fepetra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Filaza_tsotra_(fitsipiteny)&oldid=969477"
Voaova farany tamin'ny 14 Martsa 2019 amin'ny 16:43 ity pejy ity.